Atahoran’ireo Ray Aman-dreny Sasany ao Hong Kong Fa Tia Ireo Andriambavin’ny Disney Ireo Zanany Lahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2017 1:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, 繁體中文, Italiano, English
Sary natambatra avy amin'ny an'ilay mpampiasa Flickr, Amy (CC: AT)
Resaka mahamay foana hatrizay teo amin'ny media sosialin'i Hong Kong ny lohahevitra miresaka ny olan'ireo ray aman-dreny. Vao haingana, nisy lahatsary fohy anà tafatafa an-tsary ahitàna an'i Cantopop diva Miriam Yeung naneho ny zava-niainany tamin'ny maha-ray aman-dreny azy, lasa nalaza be tamin'ny Aterineto ary nahatonga andianà adihevitra maro.
Natao ny taona 2015 ilay tafatafa fa, roa herinandro teo izay, niverina niseho tao amin'ny Aterineto kosa sahala amin'ny lahatsary fohy. Tao amin'ilay lahatsary, nolazalazain'i Yeung ny fomba ny nampitsaharany ny zanany lahy tsy hanitatra fitiavana izay heverina ho fombafomban'ankizivavy loatra, tafiditra amin'izany ny fitiavana an'i Elsa, mpilalao ao anatin'ilay sarimiaina malazan'i Disney “Frozen”:
Bedesiko izy isaky ny milaza ny fitiavany an'i Elsa.
Lehilahy izy, nahoana no milalao kilalao Elsa?
Napetako tamin'ny sarin'i Elsa ny tavany ary tonga ny zanako lahy dia niteny hoe, “Tsia, neny a, tsia.”
Tia milalao ireo kilalaon-dakozia izy, hitako hafahafa izany. Tsy hahalasa azy ho vavivavy toetra ve ny karazana kilalao toy izany?
Matahotra aho hoe hanomboka ho tia ny loko mavokely izy, ka nolazaiko izao izy “Tsia, tsy tia an'io i neny. Aza mijery an'io.”
Nahasarika tsikera ireo teniny ireo, noho ny fomba fitaizàny amin'ny maha ray aman-dreny azy, ary amin'ny filalaovany ireo fitsaratsaram-poana momba ny lehilahy sy vehivavy.
Notsipihan'ny King Jer, fantsombaovao malaza miresaka fialamboly ao amin'ny Facebook, ilay lahatsary fohy ary nanehoany hevitra toy izao:
Manakaiky ny taona 2020, sarotra ny mieritreritra fa ireo ankizivavy ihany no afaka mankafia ny loko mavokely. Tena nilaozan'ny toetrandro tanteraka ny fitsratsram-poana toy izany. Mbola sarotra kokoa ny hieritreretana hoe manana namana LGBT sy mpankafy maro i Miriam Yeung […] Kanefa mbola manana izany fomba fijery izany ihany…
Vondrona LBGT iray, Action Q HK, naneho hevitra tamin'ny Facebook mikasika ilay tafatafa:
Raha toa ka midika ho fironana haha-lasa vavivavy ny fitiavana mahandro, noho izany tokony tena vavivavy i Nicolas Tse [lehilahy malaza be]. Raha toa ka midika ho fironana haha-lasa ankizivavy ny fitiavana an'i Elsa, noho izany, manompa ireo olona an'arivony tia an'i Elsa i Miriam Yeung.
Nanoratra lahatsoratra fialantsiny tao amin'ny Facebook no niafaràn'i Yeung, ary nanazava fa efa niova ny fomba fisainany tao anatin'izay roa taona lasa izay, hatramin'ny nanaovana ilay tafatafa voalohany:
[…] farany dia navelako nisafidy izy ary niezaka ny hahazo ny tontolony aho. Ary satria mankafy an'i Elsa izy, lasa fantany daholo ireo tantara mikasika ireo andriambavy ary lasa tia mamaky boky izy. Satria izy tia mahandro, mianatra ny fomba fahandro ‘brownies’ (mofomamy) izy. Tamin'ity taona ity, nanaovany mofomamy natao tao an-trano aho. Tsy tokony hiasa saina loatra isika. Mahita ireo làlany manokana izy ireo amin'ny farany. Na tsara na ratsy ireo fanehoankevitra, fampahatsiahivana daholo izy rehetra. Miala tsiny raha nahatohina olona maro iny tafatafa efa ela iny. Tsy mora izany lasa ray aman-dreny izany, ezaka mandritra ny andro iainana io ary mbola mianatra ihany aho amin'izao. Traikefa nahafinaritra iny ary feno fankasitrahana aho. Andao hifanome tànana isika dia samy ho tafavoaka miaraka.
Mety nanova ny fihetsiny i Yeung, fa mbola ny fombany fitaizany teo aloha no mbola mibahana amin'izao. Ao amin'ny media sosialy, maro ireo ray aman-dreny mahatsapa fa tsy misy diso mihitsy ny mametra ireo zazalahy tsy hilalao kilalao natao hamidy ho an'ireo zazavavy. Ohatra, ireto misy fanehoan-kevitra sasany avy tamin’ny Facebook Stand News:
Tsy tokony hanameloka ireo ray aman-dreny isika. Raha lasa pelaka ireo zanakareo, hahilikilika amin'izany izy ireo ary hiala lavitra anao ireo namana sy fianakavianareo. Tsy ho faly ianareo. Lasa sarotra ny fiainana.
Mazava be raha manana faniriana ho an'ireo zanany ny ray aman-dreny, nahoana isika no mitsikera azy amin'izany?
Samy manana ny fitsaratsaràm-poana daholo ireo ray aman-dreny rehetra.
Fa i navelan'i Yeung ho hitanareo ny zavatra nataony.
Tsy mino aho hoe handrisika ireo zanany kely hikaroka zava-baovao ireo hafa.
Fanampin'izany, mahazatra ny mahita ray aman-dreny any Hong Kong manahy hoe tena “mahafehy” ny maha-izy azy tsara na tsia ireo zanany kely. Ohatra, ao amin'ny Baby Kingdom, sehatra malaza firesahana fomba fitaizan'ireo ray aman-dreny, afaka mahita ray aman-dreny mitafa resaka toy ny hoe “Ahoana no ahafantarana fa sarimbavy ny zazalahy kely iray?” ianao. Ny ankamaroan'ireo valiny dia mifarana amin'ny fanosorana ireo fomba fihetsiky ny vatana sasany na ny filantolanton'ny feo ho “sarimbavy.”
Na dia malalaka aza ireo ray aman-dreny, mety ho poretin'ireo namana na fianakaviana mitatra kokoa izy mba ho azo antoka tsara fa tena manaraka ireo lamina ifanekena amin'ny maha-lahy na vavy azy ireo zanany. Nisy ray aman-dreny nanoratra izao tao amin'ny Baby Kingdom:
Feno efatra taona ny zanako lahy. Tia milalao kilalaom-bavy izy, toy ireo endrika andriambavin'ny Disney, Elsa sy Anna. Nanandrana nilalao fiara kely ihany izy teo aloha fa isaky ny misafidy kilalao, misafidy ireo andriambavy sy ireo kilalaom-bavy hafa izy. Tsy nanery azy velively aho hilalao ireo kilalaon'ankizilahy mihitsy aho satria heveriko fa tsy tokony ho jerena hoe an'ny lahy na vavy fotsiny ireo kilalao, ary tsy tokony hanery azy hisafidy karazana kilalao manokana isika. Mazava ho azy, tsy hitovy hevitra amin'izany foana ireo fianakaviako sy namako, ary milaza fa ataoko izay hahalasa vavivavy toetra sy sarimbavy ny zanako lahy -.-
Any an-kafa any eto an-tany, miha-miady mafy hatrany ho an'ny fandravana ny fitsaratsaràm-poana amin'ny maha-lahy sy vavy ny zanaka ireo olona. Any Angletera, nanao fanentanana iray ireo mpikatroka mafana fo, nantsoiny hoe “Aleo ny kilalao ho kilalao”, mba hiantsoana ireo orinasa mpamokatra kilalao tsy hametraka ireo famantarana manondro hoe ho an'ny vavy na lahy ilay kilalao eo amin'ireo vokatra avy aminy. Ary ilay fiantsenàna goavana amin'ny Aterineto, Amazon ihany koa, nanàla ny sokajy lahy/vavy teo amin'ny fomba fikarohana ny sokajin-kilalao. Toa mbola mety hanana ny làlana ho aleha i Hong Kong raha mbola te-hanohy.